မကြုံဘူးသေးတဲ့ ရသာထူးကြီး – Grab Love Story
ယမင်းတစ်ယောက် အမေရီကန် တွင် ကျောင်းသွားတက်ပြီး မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်နေသည်မှာ သုံးလခန့်ရှိပြီ။ ရည်းစားကလဲ တခြားမိန်းမနဲ့ ယူသွားပြီ နဂိုက ကာမစိတ်ထန်သော ယမင်းတယောက် လီးနဲ့ဝေးတာ ကြာပြီဖြစ်သောကြောင့် လက်နဲ့ဆန္ဒဖြေနေရသည်မှာ အားမရနိုင်တော့ပေ။ ထို့ကြောင့် သူမလို စိတ်ထန်သော သူငယ်ချင်း ၃ ယောက်ကို ခေါ်ကာ ဘားတခုတွင် ၀ိုင်သောက်ရင်း ကာမဆန္ဒပြည့်စေဖို့ တောင့်တောင့်တင်းတင်း ဘဲနှစ်ပွေလောက်ငှားပြီး အလိုးခံကြဖို့ တိုင်ပင်နေကြသည်။ ယမင်းက သူကျောင်းတက်စဉ်က အမေရီကန် တွင် နိုင်ငံစုံက သူငယ်ချင်းမများဖြင့် ကပွဲများသွားကာ ကဲကြ၊ ဘဲများငှားကာ အလိုးခံကြပုံများကို ပြောပြနေသည်။
” ပော့ကောင်တွေရ အမေရီကန် က ကပွဲတွေမှာ ဘဲကြီးတွေက တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ လီးက အကြီးကြီးတွေပာ၊ လီးကြီးကို လက်နဲ့ကိုင်ရမ်းပြီး လာကြည့်တဲ့စော်တွေကို လိုက်တေ့လိုက်၊ စုပ်ခိုင်းလိုက်လုပ်တာပာ” ” ပာုတ်လား ကြည့်လို့ကောင်းမှာပဲနော်” “အေးပာ တချို့စော်တွေက စုပ်ပေးကြတယ်ပာ၊ တချို့ကတော့ ရှက်နေတယ်၊ တချို့ကောင်မတွေဆို ပိုက်ဆံပိုပေးပြီး လူပုံအလယ်တင် အလိုးခံကြတာ၊ အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းတာပဲ။ လီးကြီးတွေက ရှစ်လက်မ၊ ကိုးလက်မကြီးတွေ စော်တွေ စောက်ဖုတ်ထဲဝင်သွားရင် ဖောက်….. ဘွတ်… ဖောက် နဲ့ အသံမြည်ပြီး ၀င်ဝင်သွားတာ ကောင်မတွေကလည်း တအားအားနဲ့ အလိုးခံနေကြတာပာာ၊ ငါဆိုကြည့်ရင်းနဲ့တောင် ပြီးသွားတယ်” “ပဲာ့ ယမင်း နင်ကော မခံဖူးဘူးလား” ” အောင်မယ် ဘယ်နေမလဲပာ၊ တရက်က ဘဲတပွေက တော်တော်ချောပြီး တောင့်ဖြောင့်နေတာပဲပာ၊ လီးကလဲ ကိုးလက်မနီးနီးလောက်ကြီး ငါလဲခံချင်စိတ်တွေပေါက်လာပြီး ငါ့နားလာတော့ သူ့လီးကြီးကို ကောက်စုပ်ပေးလိုက်တာ အကြာကြီးပဲ၊ ငါ့ပာာထဲကလဲ အရည်တွေကို စိမ့်စိမ့်ထွက်လာတာပာာ မလိုးခင်ထဲက တချီပြီးသွားတယ်။
ငါလဲ ဒေါ်လာ၃၀ ပေးပြီး အလိုးခံမယ်လို့ ကပ်ပြောလိုက်တော့ အဲ့ဘဲက ငါ့ကို ကောက်ချီပြီး လူပုံအလယ်က စားပွဲပေါ်ချလိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ ငါ့ဘောင်းဘီကို ချွတ်ပြီးစောက်ဖုတ်ကို သူ့လျှာကြီးနဲ့မွှေတော့တာပဲပာာ” ” နင် ကောင်းသွားတာပေါ့လေ ယမင်းမ ” ” အမလေး ကောင်းချက်ကပာာ လေ့ကျင့်ထားတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့ ချက်ချင်းကို အရည်တွေထွက်တော့တာပဲပာ။ ငါ့ စောက်စိကိုလဲ နှုတ်ခမ်းနဲ့ဖိကိုက်ပြီး ကလိတာပာာ ငါ့မှာလေပာာနယ်ထဲ မြောက်တက်သွားသလိုပဲ၊ ပြီးတော့ ငါ့စောက်ဖုတ်ထဲ သူ့လီးကြီးကိုင်တေ့ပြီး ဇွပ်ဆိုထိုးထည့်တာပာာ စောက်ဖုတ်လေး ဖောက်ကနဲမြည်ပြီး ကွဲသွားသလားလို့တောင် တွေးမိတယ်။ ငါ့စောက်ဖုတ်တခုလုံး သူ့လီးကြီးနဲ့ ပြည့်ကျပ်သွားတာပဲ ငါ့မှာလူကြားထဲအလိုးခံနေပါလားဆိုတဲ့ အသိတောင်မေ့နေပြီး သူ့ရင်ဘတ်ကြီးကို ပွတ်ပေးနေမိတာပဲ။
သူကလည်း ဖင်လေးရမ်းပြီး ညှောင့်လိုးလိုးလိုက်၊ ဖောက်….ဖောက်…..ဘွတ်…ဇွပ် ကနဲမြည်အောင် ဆောင့်ဆောင့်လိုးလိုက်နဲ့ ငါ့မှာ ကာမအတွေ့လှိုင်းကြီးပေါ်စီးပြီး တချီပြီး တချီပြီးနေတော့တာပဲပာ” ” ပာယ် ငါတို့လဲ ခံကြည့်ချင်လိုက်တာ ” ” အေးပာယ်” ” သူလဲ ငါ့နို့အုံကြီး ကိုင်နယ်ပြီး တပြွတ်ပြွတ် စို့ရင်းနဲ့ ဖောက် ဖောက် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် နဲ့ အချက် ၅၀ ၆၀ လောက် ပစ်ဆောင့်လိုးတာ ငါ့သားအိမ်တွေကို ကျိန်းစပ်နေအောင် ကောင်းလိုက်တာပာာ ပြန်တွေးရင်းနဲ့ကို ချက်ချင်းခံချင်လာပြီပာာ၊ သူကအမြန် ၁၅ ချက်လောက်နောက်ထပ်ဆောင့်လိုးပြီး လီးကိုထုတ်ကာ ဂွင်းထုရင်း ငါ့နို့တွေပေါ် လီးရည်တွေလာပန်းထုတ်တာ ငါလည်း ပါးစပ်ပာပြီး သူ့လီးကိုစုပ်ပေးလိုက်တာ သူ့သုတ်ရည်တွေ အာခေါင်ထဲကို ပူကနဲနေအောင် ပန်းမိတယ်ပာ၊ ငါလည်း အစွမ်းကုန် နည်းကုန်စုပ်ပေးလိုက်တာ သူလဲ တအားအားးး တအင်းအင်းနဲ့ သုတ်ရည်တစက်မကျန် ငါ့ပါးစပ်ထဲ ပန်းထည့်တော့တာပဲ ငါလည်း တစက်မကျန်မျိုချပြီး သူ့လီးကို အာသာငမ်းငမ်းနဲ့ စုပ်ပေးပစ်တာပာ ” “ပာယ် ကောင်းလိုက်တာပာာ ခု ရန်ကုန်မှာ အဲလိုတောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် လီးကြီးကြီးနဲ့ ကောင်လေး ၃ ယောက်လောက် ငှားပြီး ပာိုတယ်အခန်းကျယ်တစ်ခုမှာ ငါတို့ ၄ ယောက် နင်ပြောသလို ခံကြရအောင်ပာာ ယမင်း ” ” အေးပါပာ အချင်းချင်း လိုးနေကြတာကြည့်ရင်း ခံရတာ အရမ်းအလိုးခံလို့ကောင်းတာပာ ….. ငါကပြန်လာတာမကြာသေးတော့ ကောင်လေးတွေ ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာ မသိဘူး၊ ကောင်လေးရှာဖို့က နင်တို့တာဝန်ပဲ၊ ငါကတော့ အရမ်းခံချင်နေပြီ” ပာု ယမင်းက ပြောလိုက်ရာ ကျန်သူငယ်ချင်း ၃ ယောက်က. ” စိမ်လိုက်လေ ကြာသလား ငါတို့တာဝန်ထား” ပာု သံပြိုင်ရွတ်ရင်း လက်ဝါးချင်းရိုက်ကာ ဘားခန်းမှငွေရှင်းပြီး ကောင်လေးတွေကို ရှာဖွေဖို့ ထွက်ခွာသွားကြလေတော့သည်။
ယမင်းတို့ အုပ်စု ဗိုလ်ချုပ်ဈေး တ၀ိုက် ပတ်လိုက်သောအခါ ရုပ်ချောချော ခပ်တောင့်တောင့်နဲ့ ကောင်းထက်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတယောက်ရလာသည်။ သူကမှ တဆင့်သူ့သူငယ်ချင်း မင်းမင်းဆိုသူတယောက် ထပ်ငှားလိုက်ကြပြီး ယမင်း ၀ယ်ထားသော တိုက်ခန်းဆီသို့ စားသောက်စရာအပြည့်အစုံနှင့် ချီတက်ကြလေတော့သည်။ တိုက်ခန်းရောက်တော့ ဧည့်ခန်းကျယ်တွင် ထိုင်ကြကာ စားကြသောက်ကြပြီး ရင်းနှီးအောင်စကားပြောဆိုနေကြသည်။ ပြီးနောက် ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကို အ၀တ်တွေချွတ်စေပြီး ကခိုင်းလေသည်။ ကောင်းထက်နဲ့ မင်းမင်းလည်း ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်လိုက်ကြပြီး ၇ လက်မနီးနီး အရှည်ရှိသော လီးကြီးတွေ တရမ်းရမ်းနဲ့ ယမင်းတို့ သူငယ်ချင်း ၄ ယောက်ရဲ့ မျက်နှာ်တွေရှေ့ ကပြလေသည်။ ယမင်းက စပြီး ကောင်းထက်နဲ့ မင်းမင်းရဲ့ လီးနှစ်ချောင်းလုံးကို ကိုင်ပေးကာ ဂွင်းထုသလို ပွတ်သပ်ပေးနေဧ။် ။ ကောင်းထက်တို့လည်း ဒီလိုငယ်ငယ်ချောချောကောင်မလေးများက ငှားသည်မှာ ပထမဆုံးဖြစ်သောကြောင့် ဖီးတွေအရမ်းတက်ပြီး လီးကြီးများမာတောင့်လာကာ အကြောများထောင်ထပြီး ကွဲထွက်တော့မလား ထင်မှတ်ရသည်။ ယမင်းဧ။် နို့ကိုလည်း တယောက်တလုံးဆီ ကိုင်ကာချေပြီးနယ်ပေးနေလေသည်။ ယမင်းလည်း ကောင်လေးနှစ်ယောက် နို့တွေကို ကိုင်ချေပေးနေတာကြောင့်ရော၊ သောက်ထားတဲ့ အရက် အရှိန်ရောနဲ့ ဖီးများ တက်လာပြီး လီးနှစ်ချောင်းလုံးကို တလှည့်စီ စုပ်ပေးမိတော့သည်။ ” အားးးး ရှီးး၊ အိုးးး မမရယ် ကောင်းလိုက်တာ” ” အိုးးး ပိာုးးး မမ အစုပ်အရမ်းတော်တာပဲဗျာ ” ကျန်သူငယ်ချင်းများကလည်း ယမင်းတို့ ၃ ယောက်ကိုကြည့်ရင်း ဖီးများတက်လာကာ အ၀တ်တွေ အကုန်ချွတ်ပြီး စောက်ဖုတ်ကို ကိုယ်စီပွတ်နေကြတော့သည်။
ယမင်းသည် ကောင်းထက်ဧ။်လီးကြီးနဲ့ အလိုးခံချင်လာသောကြောင့် မင်းမင်းအား သူငယ်ချင်း ဇင်မာဆီပို့လိုက်ကာ ကောင်းထက်လီးအား အားရပါးရ ပလွတ် ပလွတ်…. ပြွတ်..ပြွတ်နဲ့ နေအောင် စုပ်ပေးနေတော့သည်။ ယမင်းတို့ ၄ ယောက်သည် အကောင်းစားဆိုဖာထိုင်ခုံပေါ် ပေါင်ဖြဲကာ ထိုင်နေပြီး ကောင်းထက်တို့ဧ။် စောက်ဖုတ်ယက်ပေးမှုကို တယောက်တလှည့် အရသာခံနေကြသည်။ ကောင်းထက်တို့ နှစ်ယောက်ကလည်း လေ့ကျင့်မှုအပြည့်နဲ့ဆိုတော့ စောက်ဖုတ်၎ခုကို မနားတမ်း အကျွမ်းကျင်ဆုံး ယက်ပေးနေတော့သည်။ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးကို လက်နဲ့ဖြဲကာ အတွင်းထဲသို့ လျှာနဲ့ထိုးပြီး ပြပ်ပြပ်ပြပ်နဲ့ အသံထွက်အောင်ယက်ပေးသည်။ စောက်စိလေးကိုလည်း နှုတ်ခမ်းနဲ့မနာအောင် ဖိကိုက်ကာ ဇတ်ခနဲ ဇတ်ခနဲ ကလိပေးလိုက်သောအခါ မိန်းကလေးများမှာ တွန့်တွန့်လူးကုန်ကြတော့သည်။ မနေနိုင်တော့ စောက်ရည်တွေ ပန်းထွက်သူကထွက်နဲ့ ပြီးကုန်ကြသည်။
ကောင်းထက်က ယမင်းကို စလိုးပြီး၊ မင်းမင်းက ဇင်မာနဲ့ စလိုးကာ ၄ ယောက် ၂ ယောက် လိုးပွဲကြီး စတင်ကျင်းပလေတော့သည်။ ကျန်တဲ့ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကလဲ ဘေးကနေ နို့စို့ခံလိုက် စောက်ဖုတ်အနှိုက်ခံလိုက် ကိုယ့်အလှည့်ကျ အလိုးခံလိုက်နဲ့ ကာမလှိုင်းလုံးများ တလုံးပြီး တလုံးစီးမြောရင်း တချီပြီး တချီကာမပန်းတိုင် ရောက်ကုန်ကြလေသည်။ ဖောက် …. ဘွတ်…ဗြွတ်… ဗြွတ် အားးး အီးးရှီးး အမလေး ကောင်းလိုက်တာ အိုး ဘွတ်ဘွတ်ဘွတ်… ဒုတ်…ဒစ်ဒစ်ဒစ် ပြွတ် ပစ်ပစ်ပစ်ပစ် ဇွပ် ဘွတ်ဘွတ်ဘွတ်ဘွတ် စွပ်စွပ်စွပ် ဒစ်ဒစ်ဒစ်ဒစ်ဒစ် ဗြွတ်ဗြွတ်ဗြွတ်ဗြွတ် ပလွတ်ပလွတ် ဖွတ်ဖွတ်ဖောက်ဖောက်ဖောက် အီးးး ရှုး အားးး မြန်မြန်ဆောင့် တအားလိုးပေး ဆောင့် ဆောင့် ဘွတ်ဘွတ်ဘွတ် ဒုတ်ဒုတ်ပလွတ်ပလွတ် အခန်းတွင်း၌ အသံပေါင်းစုံထွက်နေကာ ဖြည်းဖြည်းညှောင့်လိုးလိုးလိုက် အမြန်ခပ်စိပ်စိပ် ဆောင့်လိုးလိုက်နှင့် ကာမအရသာထူးကြီးအား မနက်၃နာရီလောက်ထိ အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ ခံစားနေကြတော့လေ သတည်း။